YEYINTNGE(ကနေဒါ): အဖမ်းခံရပြီး သတင်းမကြားရပါကICRC အဖွဲ့ကိုဆက်ပါ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ICRC ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများထဲမှ တစ်ခုမှာ အကျဥ်းသားများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များအပါအဝင် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားအကြမ်းဖက်မှုအခြေအနေများကြောင့်ဖြစ်စေ ကွဲကွာသွားသူများအကြား မိသားစုအဆက်အသွယ်ပြန်လည်ရရှိစေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သင့်မိသားစုထဲမှ တစ်စုံတစ်ယောက် အဖမ်းခံရပြီး သူတို့၏သတင်းကိုမကြားရပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ ICRC အဖွဲ့ကို အရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၈၉၁၇၅၄၅၁၂ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ yan_tracing_group@icrc.org မှတဆင့် ဆက်သွယ်ပါ။ အရေးပေါ်ဖုန်းအား မနက် ၈နာရီမှာ ညနေ ၆ အကြားခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး ICRC ၏ မိသားစုများအကြားအဆက်အသွယ်ပြန်လည်ရရှိစေရေးဌာန၏ ဝန်ထမ်းက ဖုန်းလက်ခံကာ ICRC က မည်သို့ကူညီပေးနိုင်ကြောင်းနှင့် လိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးတွင် လူချင်းတွေ့ဆုံရန် ချိန်းဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။
ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်လိုခြင်းမရှိပါက နီးစပ်ရာ အိုင်စီအာရ်စီရုံးသို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်နိုင်ပါတယ်။ အိုင်စီအာရ်စီရုံးများဟာ တနလ်ာနေ့မှ သောကြာနေ့ မနက် ၉နာရီ ကနေ ညနေ ၅ နာရီထိ ဖွင့်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ အိုင်စီအာရ်စီ၏ ရုံးလိပ်စာများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပတ်များ
ရန်ကုန်ရုံး - ၂ (ဂ)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရှစ်မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
ဖုန်း - ၀၁ ၆၆၂ ၆၁၃၊ ၆၆၄ ၅၂၄၊ ၆၅၀ ၁၃၆
စစ်တွေရုံး - အမှတ် ၁/၄၊ မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ အနောက်စံပြရပ်ကွက်၊ စစ်တွေမြို့ ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။
ဖုန်း - ၀၄၃ ၂၀ ၂၂၈၄၃၊ ၂၂၉၄၄၊ ၂၂၉၄၅
မောင်တောရုံး - အမှတ် ၁၂၅၉၊ အောင်မြေဘောဓိလမ်း၊ ကညင်တန်း (မြို့မ) ရပ်ကွက်၊ မောင်တောမြို့ ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။
ဖုန်း - ၀၉ ၄၅၈ ၀၃၅ ၂၈၆
မြောက်ဦးရုံး - ညပစ ၅၄၈၊ ရွှေဂူတောင်လမ်း၊ ညောင်ပင်စျေးရပ်ကွက်၊ မြောက်ဦးမြို့ ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်။
ဖုန်း - ၀၉ ၄၅၆ ၁၉၂ ၉၂၂
မြစ်ကြီးနားရုံး - အမှတ် ၄၄၈၊ မြေမြင့်ရပ်ကွက်၊ လမ်း (၁၃)၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ ၊ ကချင်ပြည်နယ်။
ဖုန်း - ၀၉ ၄၄၂ ၆၄၅ ၉၈၇
လားရှိုးရုံး - ပါရမီလမ်းသွယ် (၄)၊ ရပ်ကွက် (၁)၊ နယ်မြေ (၁)၊ လားရှိုးမြို့ ၊ ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)။
ဖုန်း - ၀၉ ၄၀၃ ၆၀၈ ၂၅၀
ကျိုင်းတုံရုံး - ၂၈၊ နောင်ခမ်းလမ်း၊ ရပ်ကွက် (၃)၊ ကျိုင်းတုံမြို့ ၊
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)။ ဖုန်း - ၀၈၄ ၂၂၆ ၀၉
မန္တလေးရုံး - အမှတ် ၁၄၊ လမ်း ၇၀၊ ၃၂ လမ်းနှင့် ၃၃ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
ဖုန်း - ၀၉ ၈၈၃ ၇၆၈ ၉၁၆
နေပြည်တော်ရုံး - ရွှေမြန်မာဟိုတယ်၊ အခန်း (၈၂၅ - ၈၂၆)၊ ရာဇသင်္ဂဟလမ်း၊ဟိုတယ်ဇုံ (၁)၊ နေပြည်တော်မြို့။
ဖုန်း - ၀၉ ၂၆၄၃ ၆၈၂၈၅
ဘားအံရုံး - ပဒုမ္မာလမ်း၊ ရပ်ကွက် (၁)၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။
ဖုန်း - ၀၅၈ ၂၂ ၀၁၁
Worldwide and in Myanmar, the ICRC works to restore family links between people separated by armed conflict and other situations of violence, as well as detainees and their relatives.
If someone from your family has been arrested and you do not have any news from them, please contact our team via the ICRC’s hotline: 09891754512 or email yan_tracing_group@icrc.org. The hotline operates from 8am to 6pm and is answered byamember of ICRC’s “Restoring Family Links” Department. Our staff will explain how the ICRC can help. If required, they will fix an appointment to meet you in person at one of our offices. Instead of calling, you may also come directly to the nearest ICRC office. We are open from Monday to Friday, 9am-5pm.
Addresses and contact details of ICRC offices in Myanmar:
2C-5, Kaba Aye Pagoda Road, 8th Mile,
Mayangone Township, Yangon. Phone: 01 662 613, 664 524, 650 136
448, Myay Myint Ward, Lane (13),
Myitkyina, Kachin State. Phone: 09 442 645 987
1/4, Myin Pyaing Kwin Road, West Sanpya Quarter,
Sittwe, Rakhine State. Phone: 043 20 22843, 22944, 22945
Nya Pa Za 548, Shwe Guu Taung Street, Nyaung Pin Zay Quarter,
Mrauk-U, Rakhine State. Phone: 09 456 192 922
No.1259, Aung Myay Bawdi Street, Ka Nyin Tan (Myoma) Quarter,
Maungdaw, Rakhine State. Phone: 09 458 035 286
Parami 4th Lane, Ward 1, Block 1,
Lashio, Northern Shan State. Phone: 09 403 608 250
Kyaing Tong Office
28, Naung Kham Road, Ward (3),
Kyaing Tong, Eastern Shan State.
14, 70th Street, Between 32nd & 33rd Street
Chan Aye Tharzan Township, Mandalay. Phone: 09 883768916
Room 825-826, Yarza Thingaha Road, Hotel Zone (1)
Nay Pyi Taw. Phone: 09 264368285
Hpa An Office
Padonmar Road, Section (A), Hpa-An, Kayin State. Phone: 058 22 011